Wararkii ugu dambeeyay shirka Dhuusamareeb oo xaalad cakiran galay | Dhacdo
Home Wararka Maanta Wararkii ugu dambeeyay shirka Dhuusamareeb oo xaalad cakiran galay
Wararkii ugu dambeeyay shirka Dhuusamareeb oo xaalad cakiran galay
Wararka ka imaanaya Magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegaya inaanan weli horumar laga sameyn laba ka mida saddexdii qodob ee shirka maalintii 2aad ka soconaya Madaxtooyada Galmudug.
Saddexda qodob ee miiska saaran ayaa kala ah cidda soo xuleysa Xildhibaanada Gobolada Waqooyi, arrinta Gobolka Gedo iyo diidmada horaan laga muujiyay Xubnaha Guddiga Doorashooyinka qaarkood, oo Golaha Midowga Musharaxiinta dalbadeen in la bedelo.
Shirka oo ay ka qaybgalayan Madaxweynaha Jamhuuriyadda, Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda, Madaxweyne-yaasha Puntland, Galmudug, Hirshabelle, Koonfur Galbeed, Jubbaland iyo Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa maanta mar u muuqday mid wa-xoogaa horumar laga sameeyay.
Mid ka mida labada qodob ee leesku mari la’yahay waa arrinta Gobolka Gedo, oo maanta guddi ka kooban Madaxda Puntland, Galmudug, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed loo saaray inay ka soo tala bixiyan. Guddiga ayaa galabta ku taliyay in Magaalada Garbahaarey la geeyo Booliska Amisom, inay taggaan Guddiga Doorashooyinka ku metelaya Jubbaland iyo in lagu celiyo Maamulkii Jubbaland uga wakiilka ahaa Garbahaarey, si doorashada u daadihiyaan, balse uu taasi ka horyimid Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Wararka ayaa intaa ku daraya in gelinkii dambe ee maanta ay madaxda kala taggeen, iyadoo aan wax horumar ah laga samayn qodobkaas isku soo noqodkii labaad ee galabta, waxayna taasi dhabaha u xaartay in Madaxweynaha Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) uu caawa diido inuu shirka dib ugu laabto.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in Madaxweynaha Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor) uu caawa Madaxweynaha Jubbaland ugu tagay hoyga uu ka degan yahay magaalada, si uu uga dhaadhiciyo bal inuu shirka ku soo laabto, ha yeeshee uu ku gacan-seyray.
Ilo wareedyadu waxay sheegayan in Axmed Madoobe uu Madaxweyne Farmaajo ku eedeeyay inaanu doonayn in heshiis laga gaaro shirka wadatashiga.
Marka laga soo taggo Madaxweynaha Jubbaland, madaxdii kale ayaa la soo sheegaya in caawa guda galeen qodobka kale ee doodda badan dhaliyay, waana cidda looga dambeynayo soo xulista amaba magacaabeysa Guddiga Doorashooyinka ee soo xulaya Xildhibaanada Gobolada Waqooyi.
Gudoomiyaha Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Somaliya, Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo caawa khadka teleefanka lagu soo geliyay shirka ayaa ku dooday inuu yahay masuulka ugu sareeya Dowladda Federaalka ee ka soo jeeda Gobolada Waqooyi, isla-markaana uu isagu yahay kan mudan magacaabidda Xubnaha Guddiga Doorashooyinka ku metelaya Somaliland, sidaasi daraadeedna aanba loo baahnayn in arrintaasi uu iskaashi kala sameeyo Ra’iisal Wasaare Kuxigeenka Dalka, Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar).
Dhanka kale Madaxweyne Farmaajo ayaa la soo sheegaya in uu tanaasul ka muujiyay in la bedelo Xubnaha Guddiga Doorashooyinka, ee qaarkood la sheegay inay ka tirsan yihiin Saraakiisha Hay’adda NISA iyo Shaqaalaha Rayidka ee Xafiisyada Madaxda.
Sida muuqataba shirka ayaa markale dib uga dhici doono jadwalkii Villa Somalia, ee ahaa in shirka uu socdo 1-da illaa 3-dii bishan oo shalay ku beegneyd.
Is mari-waaga ka taagan shirka Dhuusamareeb ayaa imaanaya, xilli Beesha Caalamka ay Madaxda Soomaalida ku cadaadineyso in ay is afgarad ka gaaraan doodaha ka dhashay heshiiskii 17-kii bishii September ku gaareen Caasimadda Muqdisho.
Nagala soo xiriir dhacdogmail.com
Previous articleUrurada Bulshada oo war ka soo saaray shirka Dhuusamareeb
Next articleShabaab oo caawa weeraray Magaalada Dhuusamareeb